Iindaba -Yintoni ilaphu le-triblend? Kutheni ithandwa kangaka?
Yintoni ilaphu le-triblend? Kutheni ithandwa kangaka?
Kutheni ihempe yetriblend ishushu kakhulu? Xa umthengi wam efuna ingcebiso ngokukhetha izinto zokwenza ihempe eqhelekileyo, ndiqinisekile ukuyicebisa. Ukuba ubungandibuza ukuba kutheni, bendiya kukuxelela ukuba i-triblend tee yeyona nto ithambileyo oya kuyiphatha.
Njengoko unokuthelekelela kwigama triblend, umxube wehempe wenziwe ngamalaphu amathathu ahlukeneyo. Ngelixa i-t-shirt yesiqhelo iyi-100% yomqhaphu, ii-triblend tees ziyi-50% ipholiyesta ezingama-25% yomqhaphu ngama-25% eRayon okanye ngama-50% ipholiyesta engama-38% yomqhaphu nge-12% yeRayon, ebenza bathambe. I-Kinda ifana nesikipa esimnandi esihamba kancinci kancinci kwaye sizolula ngakumbi kubo. Ihempe yethu yetriblend nayo yenze itekhnoloji ekhethekileyo kwaye yayihlamba, mayizive ikhululekile.
Kuthekani ngokuprinta kwihempe yetreyini?
Ngaba le nto yahlukileyo triblend iphambanisa uyilo lwegraphic oluprintwe kuyo? Hayi ncma. Kukho umbala omncinci owahlukileyo phakathi kwee-triblends kunye neekhati zomqhaphu, kodwa umahluko mncinci. Ukuba kukho nantoni na, ii-triblends zenza ukuba uyilo lubonakale lungcono kancinci. Ungajonga ifoto esiyilungiselele abathengi bethu.
Ke ikho onayo: eyona nto ithambileyo ye-tee, triblend. Apha ngezantsi kukho umbala wethu o-triblend swatch, le mibala ilungile yenziwe, i-moq ifuna nje i-120pcs / umbala.
Ihempe yekotoni eyi-100%
Ukuba ufuna ukwenza eminye imibala, sinokuyidaya ngokwekhowudi yakho yombala ye-pantone. I-50% ye-polyester ye-25% yomqhaphu eyi-25% yeRayon ebonakalayo, umbala owenziwe ngokwezifiso zii-2000pcs / umbala. Ukuba awudingi ubungakanani obukhulu kangaka, sicebisa ukuba ungakhetha i-50% ye-polyester i-38% yomqhaphu i-12% yeRayon, i-moq iya kuba ngama-500pcs / umbala. Inkonzo yokutshintsha umbala enokubakho isimahla.
Ngaba ufuna ukuqala ngokuthengisa i-triblend t-shirts? Zama ukunxibelelana nathi ngokukhululekileyo ngomgangatho wesalathiso esinye!